အပေးအရမ်းကောင်း – Grab Love Story
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာ..။ ကျနော့် အိမ်မှာ အပ်ချုပ်စက်လေးတစ်လုံး ရှိတယ်ဗျ..။ အရင်တုန်းက ရယ်ဒီမိတ်တွေထက် ချုပ်ဝတ်ကြတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ အမေ့​​က ကိုယ်တိုင်လည်းချုပ်တတ်နေတော့ စက်ဆိုင် မအပ်တော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်ချုပ်တယ်။ အစ်မလည်း အစက ဘေးကဝိုင်းကူရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူလည်း ကိုယ်တိုင့် ​​ချုပ်တတ်သွားတယ်..။ ဆိုတော့ကာ အပ်ချုပ်စက်လေးက အမေက သုံးလိုက် အစ်မက သုံးလိုက်နဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ဂျောက်ဂျက် ဂျောက်ဂျက်နဲ့ နေ့တိုင်းနီးပါး မြည်နေတတ်တယ်။ ကျနော်ကလည်း ချာတိတ်ပေါက်စအရွယ်ဆိုတော့ အဲဒီ ဂျောက်ဂျက် ဂျောက်ဂျက်မြည်သံကြီးကို စိတ်ဝင်စားပြီး အမေနဲ့ အစ်မတို့ အဝတ်ချုပ်နေတိုင်း အပ်ချုပ်စက်နားမှာ ရှိနေတတ်တယ်..။ အပ်ချုပ်စက်ရဲ့ ခြေနင်းကို နင်းလိုက်တိုင်း ဘေးက အဝိုင်းကြီးလည်နေတာကို ကြည့်ပြီးလည်း သဘောတွေကျလို့….။ နောက်ပိုင်းလည်းကျရော အဖေက အရုပ်တွေ ခဏခဏဝယ်ပေးတော့ အာရုံက အရုပ်တွေဆီမှာဘဲ ရှိတော့တယ်..။ ဂျောက်ဂျက်ဂျောက်ဂျက် မြည်ပြီး အဝိုင်းကြီးလည်လည်ေ့​​နတဲ့ အပ်ချုပ်စက်နား သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး..။ ကျနော်လည်း ကျောင်းတွေပြီးလို့ အလုပ်တွေလုပ်လိုက် အခွင့်အရေးပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်ပြောင်းလိုက်နဲ့ အခုပြောင်းလာတဲ့ အလုပ်က နေပြည်တော်ကို ခဏခဏသွားရတယ်..။ နေပြည်တော်မှာ ရုံးခွဲရှိပေမယ့် ရုံးထိုင်ပေးမယ့် လူမရှိတော့ တစ်လ တစ်ခါလောက် ကိုယ်စားသွားသွားနေပေးရတယ်..။ ရုံးက နဲနဲကပ်စေးကျတော့ ရုံးကားလည်းမပေးဘူး..။ အမြဲတမ်း အဝေးပြေးကားကြီးတွေနဲ့ဘဲ ခရီးထွက်ရတယ်..။ နေပြည်တော်ရောက်မှ အဲဒီရုံးက ကားကို ယူသုံးရတယ်..။ ပြီးတော့ ရုံးခွဲက နေပြည်တော်မှာ ဆိုပေမယ့် တည်းရမယ့် ဟိုတယ်က ပျဉ်းမနားမြို့ထဲမှာဆိုတော့ ဆင်ရုပ်ကြီးနားမှာ ဆင်းပြီး ဟိုတယ်ကို အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်နေကျ..။ အခုတစ်ခေါက်လည်း လမ်းလျှောက်ပြီး ဟိုတယ့်​​ကို သွားနေတုန်း ဘေးနားကို ကားတစ်စီးက အရှိန်ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ကပ်လာတယ်..။
ကားမောင်းသူဘက်က ကားမှန်အနက်ရောင်လေးက အောက်ကို လျှောကျသွားပြီး…. “မောင်လေး…နှင်းဆီအဝိုင်းကို ဒီကနေ ဘယ့်​​လိုသွားရလဲ ??” အသံပိုင်ရှင်ကို စူးစမ်းလိုက်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်….။ ရုပ်ကသိပ်တော့မလှပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုတော့ရှိတယ်…။ နှာတံစင်းစင်း ပါးဖောင်းဖောင်း မေးချွှန်ချွှန်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက တွဲတွဲလေး… မိတ်ကပ်ကာလာ သိပ်မပါတဲ့ မျက်နှာက နည်းနည်း ဆက်ဆီ တော့ ဖြစ်တယ်…။ “မောင်လေး သိလား…” သူ့မျက်နှာကို သရုပ်ခွဲနေတဲ့ ကျနော့်ကို အသိပေ့း​​သလို ထပ်မေးလိုက်မှ ကျနော်လည်း လိုရင်းကိစ္စအပေါ် အာရုံပြန်ရောက်တော့တယ်။ သူက အကူအညီတောင်းတဲ့သူဆိုတော့ မျက်နှာလေးကို ပြုံးထားရှာတယ်..။ “ဒီကနေ ရှေ့ဆက်သွားပြီး ……..” “သြော်….သိပြီ ….” ကျေးဇူးဘဲ မောင်လေးလို့ပြောပြီး ထပ်ပြုံးပြသွားတဲ့ မျက်နှာလေးက ကားမှန်အနက်ရောင်နောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အချိန် ကျနော်လည်း သူ့အပြုံးကို ငြိသွားတယ်..။ ကျနော့် ဖေးဘရိတ်ဖြစ်တဲ့ သွားတက်လေးတွေ သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လေ..။ သူ မောင်းလာတဲ့ကားက ထွက်သွားပေမယ့် ကျနော်က လမ်းဘေးမှာ ကျန်နေခဲ့တုန်း…။ သူ့မျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း အောက်က ညီလေးက ထောင်ထလာတယ်..။ မဖြစ်သေးပါဘူး….. လမ်းမအလယ်ကြီးမှာ ဘောင်းဘီခွတည့်တည့်က ဖုဖုဖောင်းဖောင်းနဲ့ လောင်တီးနေတာ လူေ့​​တွမြင်ကုန်ရင် ရှက်စရာ…။ လေကို ပါးစပ်ကနေ ခဏခဏမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့မှ ညီလေးက ပြန်ကျတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဟိုတယ်ကို ဆက်လျှောက်နိုင်တော့တယ်…။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ အခန်းယူပြီး ခဏနားလိုက်တယ်။ ပြီးမှ ရေမိုးချိုးပြီး ရုံးကားကို လာကြိုခိုင်းလိုက်တယ်…။ ရုံးမှာ ဟိုလုပ်သည်လုပ်နဲ့ နေ့လည်ကျော်တော့မှ မနက်ကတည်းက ဘာမှ မစားရသေးမှန်း သတိထားမိတယ်…။ အဲဒါနဲ့ တစ်နေ့စာ ဖြတ်စရာရှိတာ ဖြတ်ပေးပြီး ရုံးကားပါတစ်ခါတည်းယူရင်း ရုံးဆင်းခဲ့လိုက်တယ်..။ သပြေကုန်းဘက်က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စားသောက်ပြီး ဈေးထဲက ညီဝမ်းကွဲ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်..။ သူက ပျဉ်းမနားသူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သပြေကုန်းဈေးထဲမှာ ပျဉ်းမနားလက်ဆောင်နဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး ဖွင့်ပြီး အခြေကျနေလေရဲ့…။ သူနဲ့ ထွေ့​​ရာလေးပါး စကားပြောနေတုန်း ဈေးဝယ်တွေရောက်လာတော့ ညီဝမ်းကွဲက ဈေးထရောင်းတယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကောင်မလေး သုံးယောက် ဆိုင်ရှေ့ကို ထပ်ရောက်လာပြီး ဟိုဟာ ဒီဟာ လက်ညှိုးထိုးပြီး မုန့်တွေ မှာနေတော့ ညီဝမ်းကွဲက လက်မလည်တော့ဘူး…။ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ဈေးကူေ့​​ရာင်းပေးလိုက်တယ်…။ ကောင်မလေးတွေ ဝယ်တာ တော်တော်များတယ်…။ ကြက်သွန်ပေါင်းကြော်ထုပ်တွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး..။ နန်းစိန်ကိတ်တွေလည်း အများကြီးဘဲ..။ လာဝယ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်း ခပ်မိုက်မိုက် ဆယ်ကျော်သက် ၁၇ ၁၈ အရွယ်လေးတွေ…။ ညီဝမ်းကွဲက ပြန်ရောင်းဖို့လား မေးတော့ မဟုတ်ဘူး လက်ဆောင်ပေးဖို့လို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ပြန်ဖြေတယ်..။ ပိုက်ဆံလည်း ရှင်းပြီးရော မုန့်တွေ တအားများတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကားပါကင်ဘ့​​က်ကို ပြန်ထွက်သွားပြီး ပြန်လာတော့ အဖော်တစ်ယောက်ထပ်ပါလာတယ်…။ ကောင်မလေးနဲ့ ပါလာတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကျနော် မြင်လိုက်တော့ ဟတ်ခနဲ စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်…။ ခင်ဗျားတို့ တွေးမိတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ မနက်က ကျနော့်ကို လိင်စိတ်ကြွစေခဲ့တဲ့ ဆက်ဆီ မျက်နှာပိုင်ရှင်..။ အခုတစ်ခေါက် ထပ်မြင်လိုက်ရတော့လည်း စိတ်တွေက ပြန်ကြွချင်လာတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေက တစ်ခါတစ်လေ ဇာတ်လမ်းဆန်တတ်တာကို ကျနော် လုံးဝ လက်မခံခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ တကယ်ဖြစ်နေပြီ…။ ကံကြမ္မာက ကျနော့်ကို ကျီစားနေပြီလား မသိဘူး…။ ကျနော်လည်း မုန့်တွေကို အိတ်တွေနဲ့သာ ထုပ်ပေးနေတာ အကြည့်တွေက သူ့ဆီ ရောက်ရောက်နေတယ်..။ မျက်နှာက ဆက်ဆီ ကျသလို ကိုယ်လုံးကလည်း လုံးဝအကိတ်..။ ခွန်းဆင့်နေခြည်လိုေ့​​ဘ်ာဒီမျိုး…။ တင်သားကြီးတွေက အနောက်ကို ကော့ပြီး ကောက်နေတာ ရှယ်ဗျာ..။ အပေါ်က အဖြူရှပ် အပွကို ဝတ်ထားတော့ ရင်သားတွေက သိပ်မသိသာပေမယ့် ဆိုဒ်ကြီးမယ့်ပုံဘဲ…။ ခက်တာက အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို မှတ်မိပုံ မပေါ်ဘူး…။ ဒါနဲ့ မုန့်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကို သူ့ကို ကမ်းပေးရင်း ကျနော်လည်း ပြုံးပြလိုက်ပြီး “အစ်မ..မနက်က ကျနော် လမ်းပြောပြလိုက်တာ အဆင်ပြေလားဗျ…” အဲဒီတော့မှ သူ့မျက်လုံးက ဝိုင်းသွားပြီး အံ့သြသွားတဲ့ အမူအရာနဲ့ ကျနော့်ကို မှတ်မိသွားတယ်..။
“သြော် အဟင်း.. အဆင်ပြေတယ် မောင်ေ့​​လး..။ ဒါက မောင်လေး ဆိုင်လား ?…” “မဟုတ်ဘူး အမ..။ ကျနော့် ဝမ်းကွဲ ဆိုင်ပါ…။ ကျနော်က ရန်ကုန်ကပါ…နေပြည်တော်မှာ ရုံးကိစ္စရှိလို့…ကျနော့်နာမည်..…….” နာမည်ဘာညာ မိတ်ဆက်ပြီးတော့ လိပ်စာကဒ်လေး ထုတ်ပေးလိုက်တယ်…။ ကဒ်ကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီး “…… တွေ လုပ်တာလား…. အမတို့ ရုံးက ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိတယ်..” “ဟုတ်ကဲ့ အမ…. အမတို့ ရုံးမှာ လိုအပ်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ…အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးပါ့မယ် …..” ဘာညာကွိကွ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ စကားတွေပြောပြီး သူလည်း အထုပ်တွေဆွဲပြီး ကားပါကင်ကို ပြန်သွားတယ်..။့ ​​အဲ့ဒီ အမက ကျနော့် ကဒ်သာ ယူသွားတာ သူ့ ကဒ်ကျတော့ ပြန်မပေးသွားဘူး..။ ရုံးက လူတွေကို ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဘဲ ပြောသွားတယ်..။ အခုထိ နာမည်တောင် မသိလိုက်ရပေမယ့် အဲ့ဒီအမရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှနဲ့တင် တော်တော်ကို တန်ပါတယ်ဗျာ…။ ကားပါကင်ဘက်ကို ပြန်သွားတဲ့ အချိန် လမ်းလျှောက်သွားတိုင်း တင်ပါးကြီးတွေက ငြိမ့်ခနဲ ငြိမ့်ခနဲ လှုပ်လှုပ်သွားတာ အနားပြေးကပ်ပြီး အားရပါးရ ညှစ်ပစ်ချင်စိတ်တွေတောင်ပေါက်တယ်..။ ဒါမျိုး စော်ကြီးကို ဖြည်လိုက်ရရင်တော့ ပျစ်နှစ်နေမှာဘဲ…။ ကာမပိုင် ရှိမှန်းမသိ မရှိမှန်းမသိ အားပါးတရ ပြစ်မှားလို့ ဝတော့မှ ဆိုင်ထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့ ညီဝမ်းကွဲက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ မျက်ခုံးပင့်ပြပြီး… “တောင့်တယ်နော်….” “အင်း…တော်တော် တောင့်တယ်…” ခက်တော့တာဘဲ…. စိတ်က ခုနက စော်ကြီးဆီဘဲ ရောက်ရောက်နေတယ်…။ တစ်ခါမှ ဒီလို မဖြစ်ဖူးသေးဘူး…။ ရည်းစားလည်း ထားဖူးတယ်…။ စော်တွေလည်း ဖြုတ်ဖူးသားနဲ့ ဒီမိန်းမနဲ့ကျမှ ဘယ်လို ဖြစ်တယ်ကို မသိဘူး..။ သူ့ကို တွေ့ရင် စိတ်တွေက ထထ လာတယ်..။ မယုံမရှိနဲ့ဗျ….ခင်ဗျားတို့ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ရင် ကျနော်လိုဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိမ်းသေတယ်..။ ဟိုတယ်ကို ပြန်လာရင်း ကားမောင်းလာတော့လည်း မျက်လုံးထဲ စော်ကြီးကိုဘဲ မြင်မြင်နေတယ်…။ အသားက အဖြူကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဝါဝ့ါဝင်းဝင်းလေး…။ ဘော်ဒီအချိုးအစားကလည်း ပြစ်ပြက်လုပ်ပစ်လိုက်ရင်တောင် တောင့်ခံနိုင်တဲ့ အမျိုးအစား…။
ဟူးး မဖြစ်တော့ဘူး ဓါတ်ကြမ်းတိုက်မှ ဖြစ်မယ်…။ စားလည်း ဒီစိတ် သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့ဆို ကြာရင် ခက်မယ်…။ ဖုန်း contact ထဲက နာမည်တစ်ခုကို နှိပ်ရင်း ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ ဟိုဘက်က ဖုန်းချက်ချင်း လှမ်းကိုင်တ့​​ယ်..။ “ဟဲလို…ကိုကြီး…ရောက်နေပြီလား” “၉နာရီလောက် လာခဲ့မယ်…” “အင်း…မျှော်နေမယ်နော် ကိုကြီး…..” ဟိုတယ်ပြန်ရာက်တော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တာနဲ့ ဂွင်းတစ်ချီထုပြီး တစ်ရေးအိပ်လိုက်တယ်…။ တစ်ရေးအိပ်ပြီး နိုးလာတာနဲ့ ရေချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး ခုနက ဖုန်းကိုင်တဲ့ ကောင်မလေးဆီ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်…။ သူ့ နာမည်က ကေသရီ…။ အသားညိုညိုနဲ့ ရင်သားတွေ ထွားသလောက် ခါးက သိမ်သိမ်လေးနဲ့ အပေးအရမ်းကောင်းတယ်…။ နေပြည်တော်ကို စစရောက်ချင်း နှစ်ခေါက်လောက်မှာ နယ်ခံ တစ်ယောက်က ချိတ်ပေးတာ…..။ နောက်ပိုင်း ကျနော်လည်း သူ့ဆီမှာ ခဏခဏ အားပေးဖြစ်တော့ ဖုန်းနံပါတ်တောင် အလွတ်ရနေပြီ…။ ကေ့​​သရီနေတဲ့ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ သူက ထွက်စောင့်နေတယ်…။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ဟိုတယ်ကို ပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်..။ ကားပေါ်မှာ ကေသရီရဲ့ ရေမွှေးနံ့က မွှေးနေတာဘဲဗျာ..။ ကားမောင်းရင်း ကေသရီကို လှည့်ကြည့် လှည့်ကြည့်နဲ့ ညီလေးက မတ်လာရော..။ ဘေးတိုက် မြင်နေရတော့ ကေသရီရဲ့ နို့အုံ ထွားထွားကြီးက ဖြစ်ညှစ်ချင်စိတ်တွေ တားမရဆီးမရဘဲ။ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကေသရီ လက်ကို ယူပြီး ညီလေးပေါ် တင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်…။ ကေသရီကလည်း အလိုက်သိပါတယ် တစ်လမ်းလုံး ဖြည်းဖြည်းလေး ဂွင်းတိုက်လာပေးတယ်…။ သူက ညီလေးကို ချော့လေ စိတ်တွေက ကြွလာလေနဲ့ လီဗာကို ခင်ပြင်းပြင်းနင်းပြီး ဟိုတယ်ကို ရောက်အောင် ခပ်မြန်မြန်လေး မောင်းလိုက်တယ်…။ ဟိုတယ် အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ လူက လုံ့းဝ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး..။ ကေသရီကို အတင်း ဖက်နမ်းပြီး ကုတင်စောင်းမှာ လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်…။ ခရီးဆာင်အိတ်ထဲ အမြဲဆောင်ထားတဲ့ ကွန်ဒွန်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး စွပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း တန်းထည့်လိုက်တာဘဲ..။ စစချင်း နဲနဲတော့ ကြပ်ပေမယ့် လူက မွှန်နေတော့ ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ဆောင့်လိုက်တယ်…။ ကေသရီကတော့ စစချင်း မနှူးဘဲ တန်းထည့်လိုက်လို့လားမသိဘူး..။ နာလို့ထင်တယ် မွေ့ရာခင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်ထားရင်း တအားအား အော်နေတယ်..။ နောက်ပိုင်း အချက်ရေ များလာတော့ အသံတော့ သိပ်မထွက်တော့ဘူး…။ ဖင်ကြီးက အနောက်ကို ပြန်ကော့ကော့ပေးလာတယ်..။ ကျနော်လည်း လိုးလိုးချင်းတုန်းက သူ့ကို ဖီးလ်တွေတက်ပြီး တက်ချနေပေမယ့် အရှိန်ရလာတော့ မနက်က စော်ကြီးကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်လာတယ်..။ အဲဒါနဲ့ အာရုံက အဲဒီစော်ကြီးဆီရောက်သွားတော့ ညီလေးက ပိုတင်းလာတယ် ပိုမတ်လ့ာတယ်..။
အဲ့ဒါနဲ့ အဲဒီစော်ကြီးကို မှန်းပြီး ကေသရီကို အားရပါးရ ဗျင်းတာ တဖုန်းဖုန်းတောင်မြည်တယ်..။ ကေသရီလည်း တအင့်အင့်နဲ့ ဖီးလ်တွေတက်လာတာလားမသိဘူး..။ သူ့ အဖုတ်ထဲက အဖြူတွေက ကျနော့်အတံမှာ ကပ် ကပ်ပါလ့ာသလို အထဲက ညှစ်ညှစ်ပေးနေတယ်..။ ကေသရီ အဖုတ်က ညှစ်ပေးလေ ကျနော်က နင်းကန် ဆောင့်လေနဲ့ ကျနော်ကလည်း မနက်က စော်ကြီးက ကျနော့်ကို စိတ်လိုလက်ရ ကုန်းနေတယ်လို့ သဘောထားပြီး တအား ဆောင့်ဆောင့်ထည့်တာ…။ ကေသရီရဲ့ အဖုတ်ကလည်း ကျနော်အတံကို နှစ်ဖက်လုံးက ညှပ်ထားသလို အားက ပြင်းလာတော့ ဒစ်ထိပ်တွေပါ ကျိန်းလာတယ်..။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ညီလေးက အရည်တွေ အားပါးတရ ပန်းထွက်သွားတယ်…..။ အရသာကတော့ ဘာကောင်းသလဲ မပြောနဲ့…။ ကေသရီ့ အဖုတ်ထဲ စိမ်ထားရင်း မျက်လံးမှိတ်ပြီး အရည်တွေကို ရသလောက် ညှစ်ထုတ်နေမိတယ်..။ အခုဆို ကေသရီလည်း ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းတာတကနေ မွေ့ရာနဲ့ ရင်ဘတ်ကို အပ်ပြီး ဖင်ကြီးထောင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ အနားယူနေပေမယ့် သူ့အဖုတ်က ဇွိဇွိနဲ့ ညှစ်ညှစ်ပေးနေတုန်း..။ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ပေါင်နဲ့ ကပ်ပြီး အထဲမှာ အညှစ်ခံရင်း စိမ်ထားတာ ရှယ်ဘဲဗျာ..။ စိတ်ကူးထဲမှာတော့ အောက်မှာကုန်းနေတာက မနက်က စော်ကြီးဘဲ…။ စိမ်လို့ အားရတော့မှ အတံကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ကေသရီ အဖုတ်ထဲကနေ ဗြစ်ဆို ထွက်လာတယ်..။ ဟိုက်…ကွန်ဒွန်က ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ပေါက်သွားလည်း မသိဘူး….စောက်ပြဿနာဘဲ…။ အဲဒါနဲ့ ကွန်ဒွန်ကို မြန်မြန်ချွတ် အမှိုက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ တစ်ခါတည်း တန်းပြေးရတယ်…။ ကေသရီလည်း အနောက်ကနေ လိုက်လာပြီး… “အကိုကြီး…ဘာဖြစ်လို့လဲ…” “အစွပ်ပေါက်သွားလို့…” “ဟင်..ဟုတ်လား…ဒုက္ခပါဘဲ..” “နင် သန့်တော့ သန့်ပါတယ်နော်…” “အာ..ကိုကြီးကလည်း သန့်ပါတယ်..ဘာရောဂါမှ မရှိဘူ့း..” ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူကတော့ ဆိုက်ကို ဝင်သွားပြီ…။ ညီလေးကလည်း ချက်ချင်းညှိုးကျသွားလိုက်တာ ခုနက သူ မဟုတ်တဲ့အတိုင်းဘဲ…။ နှစ်ယောက်လုံး ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲနေလိုက်တယ်…။
ကေသရီက ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို ခေါင်းအုံးပြီး စောင်လေးခြုံလို့…။ ကျနော်ကတော့ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ချွေးပြန်နေတယ်..။ မနက်က စော်ကြီးလည်း အတွးထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ရောဂါများ ကူးနေမလားဆို့​​တဲ့ ဆိုက်ကိုကြီးက လူကို ခြောက်လှန့်နေတယ်..။ ကိုယ် ချလိုက်တဲ့ မိန်းမ က သန့်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် သူက တကယ်တမ်းတော့ ကြေးစားဘဲလေ…။ ယတိပြတ်ကြီး ပစ်ယုံလို့လည်း မရဘူး..။ အခုက ဘာဘဲပြောပြော ရောဂါကူးစရာရှိရင် ကူးနေနိုင်တဲ့ အနေအထား..။ တကယ်လို့များ ရောဂါကူးလို့ကတော့…….။ ကေသရီကလည်း ရိပ်မိတယ် ထင်တယ်..။ ကျနော့် ဗိုက်က အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်ရင်း သူ ဘယ်လောက်သန့်တဲ့ အကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီး တတွတ်တွတ် ပြောနေတယ်…။ သူက ဘယ်လောက် ပြောပြော စိတ်သက်သာရာနဲနဲတော့ ရပေမယ့် လူက လန့်နေပြီ…။ ကေသရီ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကည်း ကျနော့် အတံကို ညှပ်ထားလိုက်တာ ပြတ်ထွက်တော့မယ့် အတိုင်း…..ကတ်ကြေးကြနေတာဘဲ..။ ကတ်ကြေးဆိုမှ ငယ်ငယ်တုန့်းက အဖြစ်ကို သတိရမိတယ်..။ တစ်ခါတော့ အစ်မက အပ်ချုပ်နေတုန်း အမေက ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ကြယ်သီးတွေတပ်နေတယ်..။ ကျနော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် သွားစပ်စုရင်း သံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကတ်ကြေးတစ်လက်ကို သွားတွေ့တယ်..။ ကတ်ကြေးမှာလည်း စာလုံးတွေကို အစက် အစက်လေးတွေနဲ့ ထွင်းထားသေးတယ်..။ ကျောင်းတတ်ခါစ အရွယ်ဆိုတော့ စာလုံးတွေကို ပေါင်းမဖတ်တတ်သေးဘူး..။ “အမေ ဒါဘာရေးထားတာလဲ…?” “ဟဲ့..သား…အမေ့ကို ပေးစမ်း…။ နောက်ခါ မကိုင်ရဘူးနော်…။ အဲ့ဒီမှာရေးထားတာ မကွေးကတ်ကြေးတဲ့..။ ညှပ်လိုက်လို့ကတော့ တိခနဲဘဲ..ကလေးတွေ ကိုင်ရင် အန္တရယ်ရှိတယ်..အမေ့ကို ပေး…….” အမေက ကတ်ကြေးကို ကျနော့်လက်ထဲက ယူပြီး အစ်မကို အပ်ချုပ်စက်အောက်က အံ့​​ဆွဲလေးထဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော် အပ်ချုပ်စက်နားရောက်တိုင်း အမေနဲ့ အစ်မက ကတ်ကြေးကို ကျနော် မယူကိုင်မိအောင် သတိထားပြီး အပ့်​​ချုပ်စက်အံဆွဲထဲ ထည့်ထည့်ထားတော့တာဘဲ…။ ကျနော်လည်း မကွေးကတ်ကြေးအကြောင်း သတိရသွားရင်း ကေသရီ့ ပုခုံးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပြီး… “ကေသရီ..နင့်ဇာတိက ဘယ်ကလဲ..” “ရေစကြိုဘက်က ကိုကြီး…ဘာလို့လဲ..” ဟိုက်……။ ကျနော်ကတော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကာလသားရောဂါ အရင် ပြေးစစ်ရတယ်..။ အဖြေလွှာ ထုတ်ထုတ်ကြည့်ချင်း လူက လက်တွေတောင် တုန်တယ်..။ တော်သေးတယ် ရောဂါမရှိလို့…။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ စစ်ဖို့တော့ ကျန်သေးတယ်..။ အဲဒီ အတွက်လည်း စိတ်ပူနေရတုန်းဘဲ..။ ဒီကြားထဲ ဟိုစော်ကြီးရဲ့ ရုံးက ဆက်သွယ်လာလို့ အဲဒီရုံးကို သွားရသေးတယ်..။ ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း စော်ချရ့​​င် သတိထားကြဗျာ..။ ကွန်ဒွန်တွေက ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောပြော အခန့်မသင့်ရင် ပေါက်ပြဲတတ်တယ်..။ ဒါပါဘဲ.. ပြီးပါပြီ။